Xavier Barroso. Udliwano-ndlebe nombhali Awusoze ube msulwa | Uncwadi lwangoku
Xavier Barroso. Udliwano-ndlebe nombhali wencwadi Awusoze ube msulwa
Xavier Barroso ukufota: © May Zircus. Ngoncedo lweSebe lezoNxibelelwano laseGrijalbo.
Xavier Barroso, wazalelwa eGranollers, waphumelela Unxibelelwano oluvakalayo kwaye ungumbhali wesikrini kunye nombhali. Inoveli yakhe entsha isanda kuphuma. soze ube msulwa, emva Indlela yokukhohlisa. Enkosi kakhulu ngexesha lakho kunye nobubele ngale nto udliwano ndlebe apho asixelela ngaye nangezinye ezininzi.
UNCWADI OLUTHETHAYO: Inoveli yakho entsha inesihloko soze ube msulwa. Usixelela ntoni ngayo kwaye yavela phi le mbono?
XAVIER BARROSO: soze ube msulwa Yiyo inoveli yeembono, ulwaphulo-mthetho, inkanuko kunye nokuziphindezela ebalisa ngebali labazalwana ababini abazibhaqa bentyumpantyumpeka kubundlobongela ukuze bakhusele into abakholelwa kuyo kwaye baphile kwimeko yomzabalazo wodidi. Ikwalibali I-Barcelona yahlulahlulwe yangamaqela amabini angevayo bawunikela umva, bame endleleni yemfazwe. Ngokuqinisekileyo, iminyaka apho isenzeko se abagwayi (1917-1923) kwakunzima kakhulu kumsebenzi waseBarcelona, ​​​​kodwa, kwangaxeshanye, lixesha elimnandi lokuntywila ngoku.
Kwavela ingcamango ngelixa sibhala Indlela yokukhohlisa. Ndaqala ukufumanisa kunye nokukhangela kumadoda anemipu kwaye ndaqala ukuqonda ukuba inoveli iya kuzalwa ngokusuka kolu lutsha.
XB: Ndikhumbula inoveli yabantwana abancinci Tuixi, i tuixó ukuba feia theatre, endayifunda izihlandlo ezininzi xa ndandineminyaka esi-8 okanye esi-9 ubudala. Ndatya kakhulu kwaye kungekudala. Ngethamsanqa endlwini yam kukho abafundi abambalwa kwaye badlulisele kum ukuzonwabisa. Kwaye ndikhumbula iinoveli ezininzi endazifunda xa ndandineminyaka eli-14 okanye eli-15 ubudala, njengaye Isixeko sokulinga, Indlu yeMimoya, Iintsika zomhlaba, Iminyaka eyikhulu yedwa o 1984.
XB: Ndincinci itroli ngalo lonke ixesha bendibuza le mibuzo ngesizathu esilula: ngokubhekiselele kuncwadi, Ndikufumanisa kunzima ukuthembeka. Ngaphandle koko, ndifunde iintlobo ezininzi zoncwadi ezahlukeneyo, ngoko ke uluhlu lubanzi kakhulu. Ukusuka ku-Edward Mendoza, Almudena Kukhulu, uGabriyeli UGarcia Marquez, uMarta Orriols okanye uEva Balthazar, ukuya kuOscar Wilde, UStephen ukumkani, hayi tart, uIsake UAsimov okanye eUrsula K.Leguin. Njengoko ubona, liqela le-eclectic kwaye kunokwenzeka ukuba ukuba undibuza kwiveki ezayo, ndiya kukuxelela abanye kunye nabanye.
XB: Ndingathanda kakhulu ukudibana UDorian Grey kunye nokudala? Hayi indlela ekunzima ngayo! Ndisanda kufunda Ingcungcu, kaSandro Veronesi, kwaye ndicinga ukuba ndingathanda kakhulu ukwakha umlinganiswa onje protagonista yaloo noveli.
XB: Ndicinga ukuba eyona nto ndiyithandayo kukuba cinga kakhulu kwaye ubazi kakuhle abalinganiswa phambi kokuba ndiqale ukubhala. Ndijikeleza idolophu yam, ndiyahlamba okanye ndipheke ndicinga ngabo. Ukufunda, ndiyavuma ukuba ndiyakuthanda ukuyenza ndingqengqe.
XB: Indlela yam yokubhala icace kakhulu: Ndisuka Vuka kwangoko ukubhala nokukwenza ngaphakathi imivalo okanye amathala eencwadi. Ekhaya iindonga ziwela kum.
XB: Ngaba uthetha inxalenye yembali? Ewe ewe, ndifunde iinoveli ezininzi ezivela kuloo nto yokubambisa-zonke zibizwa uncwadi lwangoku, kwakhona intsomi yesayensi, inoveli emnyama nayo yonke into ewela ezandleni zam kwaye ibonakala inomdla kum.
XB: Okwangoku ndiyafunda UNksk. Matshi, nguVirginia Feita, loo filimu yokuqala ekuthethwa ngayo kakhulu. Bandinike yona yaye, kokuncinane endikufundileyo, iyandithembisa. Malunga noku ndikubhalayo… Ndingakuxelela kuphela ukuba ndisandula ukusayina i-a isivumelwano kunye neGrijalbo kum inoveli yesithathu.
XB: Ndiyakholelwa ukuba siphila kwixesha elingenasiphelo nelityebileyo loncwadi kuba kuninzi kubhaliwe kwaye kupapashiwe (nangona kuninzi ekufuneka kufundwe) kwaye, kwangaxeshanye, ndicinga ukuba kuyingozi kuba ubuninzi obungaka abudibani nomgangatho. Mhlawumbi abavakalisi bafanele bahlele kancinane baze banyamekele ngakumbi incwadi nganye yaye, kwangaxeshanye, kubonakala kumnandi kum ukuba banokupapasha abantu abaninzi ngakumbi kunangaphambili. Ndiyazi ukuba yonke into endiyithethileyo ngalo mbandela iyaphikisana, ngokubanzi ndikwimiba emininzi, ngoko ke ndiphetha ngelithi eyona nto ilungileyo iyakuba kukufikelela kumhlaba ophakathi.
XB: La ngamaxesha anzima, kwaye andithethi oku ngenxa yobhubhani okanye imfazwe yaseUkraine, ndicinga ukuba kuluntu ngayo untywiliselwe kwingxaki enzulu yefilosofi kunye nexabiso. Nokuba besiphila kumaxesha azinzile, bekuya kuba kuninzi ekufuneka kwenziwe ukwenza umhlaba ube yindawo enobulungisa nelinganayo kwaye, ngenxa yesi sizathu, ndikhetha ukuhlala nento ezayo, kuba ndicinga ukuba abantu ekwaziyo ukufumana icala elilungileyo lezinto. Ngenxa yoko, ngokuyinxenye, thina babhali silapha, ukunyanzela ubunyani kunye nokulinganisa imihlaba enokwenzeka enceda abafundi ukuba bavele kwaye bacinge.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Xavier Barroso. Udliwano-ndlebe nombhali wencwadi Awusoze ube msulwa